Ho An’ny Venezoeliana Maro, Fambàra Fifaranan’ny Demaokrasia ao Amin’ny Fireneny ilay ‘Sarintsarim-Panonganana Fanjakana’ · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Luis Carlos Diaz Nandika (en) i Elizabeth Rivera, Jessica Korneff, avylavitra
Voadika ny 07 Avrily 2017 18:20 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Français, Español
Sariitatra maneho ny Antenimieram-Pirenena ao Venezoelà, an'i Eduardo Sanabria. Fampiasàna nahazoana alàlana
Toy ny tapaka làlan-drivotra i Venezoelà niandry izay hitranga taorian'ny nandraisan'ny Fitsaràna Antampony ny toeran'ny Antenimieram-Pirenena sy namelàny ny Filoha Nicolas Maduro hitazona ny sasantsasany amin'ny asan'ny mpanao lalàna.
Ho an'ireo feo miraradraraka aty anaty aterineto, izay nahatonga ilay olana ho lasa lohahevitra malaza erantany, izay mitranga dia tsy misy hafa amin'ny sarintsarim-panonganana fanjakàna (nataon'ny tenany ihany), izay dingana farany amin'ny fandrosoana ho amin'ny fanjakàna tsy refesimandidy notefen'ireo taona vitsivitsy lasa nisian'ny krizy politika sy ara-pitantanana tao Venezoelà. Raha ny marina, dia izay no tena famaritana azy nomen'i Luis Almagro, sekretera jeneralin'ny Fikambanan'ireo Fanjakàna ao Amerika (OAS):
Laviko ny sarintsarim-panonganana fanjakana nataon'ny fitondràna Venezoeliana tamin'ny Antenimieram-Pirenena
Ireo hafa, toy ilay Espaniola mpanao gazety, Antonio Maestre, niampanga ny fanoherana ao Venezoelà noho ny fangatahany fanonganana :
Te-hiteny aho hoe zavatra nangatahan'ny mpanohitra io fanonganam-panjakana io. Mba milaza fotsiny.
Mitohy mivoatra haingana be ny toedraharaha. Avy eo i Luisa Ortega lehiben'ny fampanoavana ao Venezoelà dia nanambàra fa ny fandravàna ny Antenimieram-Pirenena dia tsy mifanaraka amin'ny Lalàm-panorenana, fanambaràna mifanipaka amin'ny an'ny governemanta. Notapahan'ny fahitalavitry ny fanjakàna ny fampitàna rehefa tonga tamin'ny fanaovany ny fanambaràny.
Tsy nitsahatra ny nihamalemy ny Antenimieram-Pirenena
Ny fandravàna ny Antenimiera no farany indrindra tamin'ireo andianà fameperana izay nametra ny fahefàn'ny Antenimieram-Pirenena hatramin'ny nahazoan'ny mpanohitra ara-politika ao Venezoelà ny roa ampahatelon'ny toerana nandritry ny fifidianana tamin'ny Desambra 2015.
Nialoha kely monja ny nandraisan'ny mpanohitra ny fifehezana ny Antenimieram-Pirenena tamin'ny 6 Janoary 2015, vitan'ireo chavista mpanao lalàna very toerana ny nanova ireo mpitsara tao amin'ny Fitsaràna Antampony. Nampahatsiahivin'ny mpanao gazety, Eugenio Martinez, tamin'ireo mpanjohy azy fa ny ankamaroan'ireo mpitsara vaovao vao voatendry dia tsy nahafeno ireo masontsivana ilaina ho amin'ìzany toerana izany.
mpitsara 21 amin'ireo 32 ao amin'ny Fitsaràna Antampony no tsy nahafeno ny masontsivana napetraky ny lalàm-panorenana sy ny lalàna mba hitànana ireny toerana ireny #InNumbers
Talohan'ny nandraisany ny toeran'izy ireo, maro ireo mpitsara tao amin'ilay tribonaly ambony indrindra eo amin'ny firenena no efa mpikambana tany aloha tao amin'ny antoko eo amin'ny fitondràna, ny Antoko Sosialista Mitambatra ao Venezoelà. Araka izany, tsy misy mihitsy afaka ahazoana antoka ny tsy hisian'ny fitanilàn'ny fitsaràna.
Noho io antony io, ny 6 Janoary rehefa tsy nahafehy intsony ny Antenimieram-Pirenena ny chavista tao amin'ny governemanta, vitan'izy ireo ny nanangoly ny fahefan'ny Antenimiera tamin'ny alàlan'ireo rantsany matanjaka tao amin'ny Fitsaràna Antampony. Ny voalohany tamin'ireo didy navoakany dia ny fanambaràna ny Antenimiera ho ‘nanohintohina’ tamin'ny tsy firaharahiana ny lalànan-dry zareo sy ny fandosirana ireo fakàna ambavany ary fanadihadiana. Tonga hatramin'ny fibahanany ny fanadihadiana mahakasika kolikoly niteraka fanjavonan'ny vola maherin'ny 11 lavitrisa dolara, izay lohany tamin'izany ilay solombavambahoaka Freddy Guerrera.
Ampahany tamin'ny fahirano natao tamin'ny Antenimieram-Pirenena, nahenan'ny Fitsaràna Antampony ny tetibolan'ny Antenimiera ka betsaka ireo mpikambana ao no mety tsy handray karama. Zara raha nandray ny tambin'asany nandritry ny 10 volana mahery izy ireo, izay karama kely 38 dolara isambolana.
Fitoniana tsy marin-toerana
Raha mifofotra miatrika ny fanambin'ny fiainany andavanandro ireo Venezoeliana, ireo mpampiasa media sosialy kosa tsy tara tamin'ny fanehoana hevitra momba ireo fihetsika nataon'ny fahefana mpanatanteraka sy ara-pitsaràna tamin'ny antenimiera mpanao lalàna.
Ho an'i Emilia Lobo, mpampiasa Twitter no sady mpisolovava, io hetsika io dia tsy maneho fanonganana fanjakana, fa fanamafisana ny zotra iray izay ireo dingana voalohany nataony dia efa nipetraka nanomboka tamin'ny andro naha-maro an'isa ny mpanohitra tao amin'ny firenena:
Tsy fanonganana fanjakàna ilay famaizana faha #156 avy amin'ny Fitsaràna Antampony, fa fanambaràna amin'ny fomba ofisialy ny fanonganana iray efa nisoko nandritry ny efatra taona.
Lazain'ny solombavambahoaka, Luis Florido, hoe fanapahankevitry ny dobo an-drano sy maimaika nataon'ny governemanta efa marefon'ny filoha Maduro iny :
Nanamboatra làlana hisian'ny fanonganana fanjakana ny fitondrana jadon'i Maduro satria efa fantany fa akaiky ny farany ho azy, ary tsy ho afaka ny handà tsy ho avoakan'ny fifidianana eo.
Ho an'i Nathaly Quiroga, tsy isalasalàna fa Venezoeliana no nanao ilay ‘fanonganana’ :
Tena tsy mahay na inona na inona sy tsy maharaka ny momba ny lalàm-panorenan'ny firenentsika izay olona misalasala momba ny fisian'ny fanonganana teto Venezoela!
Nampahatsiahivin'i Victora Marquez, profesora eny amin'ny anjerimanontolo, ny momba ireo mpanao jadona hafa tao Amerika Latina nanafoana ny antenimiera tany amin'izy ireo:
Stroessner tao Paraguay, Costa e Silva tao Brezila, Fujimori tao Peru, ary Maduro dia samy nandrava daholo ny antenimiera tany aminy tamin'ny alàlan'ny fanonganana!
Raha i Nakira indray kosa nampiasa ilay sary mahatsikaiky iray tamin'ity volana ity ho fanazavana ny naha-ketrika maty paika ny fanaovana ‘fanonganana’ tao anatin'ny andro fandraisana karama :
Raha ny andro fandraisana karama alohan'ny faran'ny herinandro ianao no manao fanonganana, hisotro sy hiboboka ny olona ary rehefa tonga ny Alatsinainy, tsy misy na iray aza hahatsiaro izay zavanisy.
Etsy ankilany, nisy ireo talanjona tamin'ny tsy fihetsehan'ny olona ivelan'ny aterineto nanaiky ilay vaovao politika izay mihodina manodidina azy ireo:
Mbola sarotra ny hino hoe eto isika, miatrika fanonganana, ary anaty fitoniana tonga lafatra ny firenena, miaraka amin'ireo politisiana midonàka tsy manao na inona na inona fa mandany andro fotsiny
Tsy mbola nisy velively teo amin'ny fiainako nisaintsainako hoe mety ho tony sy mora tahaka izao iainantsika androany izao ny fanonganana fanjakàna eto Venezoelà.
Mandritra izany fotoana izany, ireo hafa toa an'ilay mpahay tantara sady toniandahatsoratry ny gazety El Nacional (The National), Elías Pino Iturrieta, dia nanakiana ilay fitoniana eo amin'ny firenena :
Toy ny hoe mizotra mankany amin'ny fitazanana ny fikatonana manginginan'ny Antenimieram-Pirenena isika. Faran'izay tena mampalahelo raha izany no mitranga.
Ireo fahefana vaovao azon'ny filoha
Fanapahankevitra roa lehibe manandanja no navoakan'ny Fitsarana Antampony : ny voalohany dia nanome fahefana ny filoha Nicolas Maduro hamoaka lalàna aminà karazan-javatra isankarazany isan'izany ny fitsaràna famaizana, mba hisorohana ‘ny fisian'ny korontana’ ao Venezoelà. Ny faharoa dia ny hananany ny fahefana rehetra notanan'ny Antenimieram-Pirenena tany aloha, niainga avy amin'ilay fiampangana ny rantsana mpanao lalàna ho nanao ‘fanohintohinana’.
Naky Soto, tao anatin'ny famintinana fanaony isanandro ho an'ny Caracas Chronicles, dia niresaka ireo andraikitra vaovaon'i Maduro toy izao manaraka izao :
Namoaka didy ihany koa [ny Fitsarana Antampony] hoe tokony hamerina handinika ireo lalàna marobe i Nicolás [Maduro] mba hisorohana ny mety hisian'ny loza mitatao amin'ny filaminan'ny firenena sy ny fitantanana, tafiditra amin'izany ny fanambanana ny zavabitan'ireo fikambanana iraisampirenna maha-mpikambana an'i Venezoelà.
Ny dikan'io dia mety hiverenana hodinihana ny firotsahan'i Venezoela any anatin'ireo fifanarahana sy fikambanana iraisampirenena ; tsara ny manamarika fa matetika ireo fanapahankevitra sy kiana atao an'i Venezoelà mandritra ireo vovonana erantany no heverina ho toy ny famelezana azy ary soritan'i Maduro ho toy ny fitsabatsabahan'ny vahiny. Amin'io fomba io, voahilika tsikelikely tsy ho anatin'ny habaka irisampirenena i Venezoelà, toerana izay anakianana azy noho ireo fanitsakitsahana tsy miato ny zon'olombelona, toy ny fampiantonana ny fifidianana tamin'ny 2016, ireo ampolony migadra noho ny politika, ary ireo 14 volana mahery nilonan'i Venezoelà tao anatin'ny ‘fepetran'ny tany misahotaka’ izay nahafahan'i Maduro nitantana samirery tanteraka ny tetibola tsy nifampiresahany tamin'ny Antenimieram-Pirenena.
Tsy midika izany rehetra izany fa hoe mitoka-monina i Venezoelà. Any amin'ny toerana sasany, toy ny Fikambanan'ireo Firenena ao Amerika (OAS), mbola misy hatrany fanohanana an'i Venezoelà avy amin'reo firenena izay mahita tombony amin'ny politikany mifototra amin'ny solika sy ny fanomezana natolotr'ilay filoha efa nodimandry Hugo Chavez sy Maduro izy tenany. Ireo firenena hafa, etsy andaniny, dia tsy miraharaha na tsy te-hiditra aminà fifanolanana any amin'ny faritra. Izany no antony mampisy fisalasalàna momba ny hahafahana mampihatra na tsia amin'i Venezoelà ilay Sata Demaokratika iraisan'ireo Amerikana ao anatin'ny OAS, sata izay mety hanilika ilay firenena tsy ho afaka mandray anjara any anatin'ireo fikambanana ao amin'ny faritra. Nandritry ny fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny 29 Martsa, firenena 20 no nankasitraka ny handinihana ny rarahan'i Venezoelà (vato 24 no ilaina mba hirosoana amin'izany).
i Però mandritra izany, izay firenena voalohany tao amin'ny faritra nanameloka an'i Venezoelà tamin'ireo hetsika faramparany nataony, dia nanapaka hevitra ny hisintona ny masoivohony tany Venezoelà ho toy ny endrika hetsipanoherana.
Fanampin'izay, tsy nihambahamba ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona, toy ny PROVEA, nanondro an'i Venezoela ho toy ny fitondrana jadona nanomboka tamin'ny Oktobra 2016, fotoana nanakanan'ny governemanta tsy hanaovana fifidianana. Na talohan'ny fandravàna ny Antenimieram-Pirenena aza, avy hatrany ny PROVEA dia namaritra ny toedraharaha ho toy ny fanalàna baràka ny demaokrasia manoloana ny fitondrana jadona.
Nofoanan'ny Fitsarana Antampony tanteraka mihitsy ny tany tàn-dalàna ary nohamafisiny ny #JadonaEtoVenezoelà tamin'ny fanesorana ny fahefana rehetra tsy ho eo an-tànan'ny Antenimieram-Pirenena.
Tanaty fanamarihana tsy misy hafa amin'io, ny hetsiky ny rantsna fahefana mpanatanteraka sy ara-pitsarana dia faritan'ny Ivontoerana Mpiaro Zon'Olombelona ao amin'ny Universidad Catolica Andres Bello, sy ireo vondrona mpiaro zon'olombelona Espacio Publico, sy ireo fikambanana hafa tsy miankina amin'ny fanjakana ho toy ny fivakisana goavana ao anatin'ny lalàm-panorenana.
Nandika (en) i Jessica Korneff